कोटिहोम महायज्ञका प्रमुख बाचक बालयोगेश्वर (बिजय भण्डारी) फरार,आयोजकले खोजे नयाँँ गुरु ! - Sabal Post
कोटिहोम महायज्ञका प्रमुख बाचक बालयोगेश्वर (बिजय भण्डारी) फरार,आयोजकले खोजे नयाँँ गुरु !
बुटवल – चितवनको नारायणी नदि किनारमा जारी कोटिहोम महायज्ञका प्रमुख बाचक बालयोगेश्वर उर्फ विजय भण्डारी फरार भएका छन । आफ्नो ठगी धन्दा बारेको समाचार बाहिरिन थालेपछी महायज्ञका प्रमुख वाचक बालयोगेश्वर फरार भएका हुन । उनि ठग हुन भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि महायज्ञ नै विवादमा परेको थियोे ।
प्रमुख वाचक रहेका स्वामी बालयोगेश्वरलाइ महायज्ञ आयोजक संस्थाले नै प्रवचनमा रोक लगाएपछि उनि फरार भएको बुझिएको छ । आफूलाई ‘बालयोगेश्वर महाराज’ बताउने भण्डारीले धार्मिक आवरणमा आफ्नो ठगी र जालझेले लुकाउँदै आएको फेला परेको सञ्चारमाध्यममा यतिबेला चर्चा चलिरहेको छ । महायज्ञ आयोजकले भोलि नै नयाँ गुरु ल्याई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी थालेको छ ।
ट्याक्टरमा ठोक्किएर स्कुटर चालकको मृत्यु
बाणंगा नगरपालिका–८ बोर्डगाउँमा राष्ट्रिय बाल दिवस कार्यक्रम…